Delta Nkata: Nbudata na mmeghe ozi ederede na ozi ederede | Site na Linux
N'ụbọchị ndị a nke ukwuu na nkà na ụzụ nchegbu, karịsịa na usoro nke kọmputa nche, nzuzo na anonymity, maka akụkọ maka adịghị ike ma ọ bụ adịghị ike nke nkwukọrịta na / ma ọ bụ ngwa izi ozi, dị ka, WhatsApp, a na-adọrọ mmasị ọzọ dị mma, na-akpọ Delta Nkata.
Na-akpali mmasị, n'ihi na Delta Nkata obu ohuru ngwa ngwa, nke dị iche na ndị ọzọ na-ewu ewu, zipu ozi gi site na emailezoro ezo ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, na autocrypt. Na n'etiti ihe ndi ozo, achọghị ka ndị ọrụ ya debanye aha ebe ma ọ bụ saịtị, ebe ọ bụ na, na akaụntụ email dị adị, enwere ike iji ọrụ ha.
Anyị na-adịbeghị anya gwa banyere ọzọ na-akpali ngwa ngwa, dị ka ihe ọzọ na telegram o WhatsAppkpọọ nnọkọ. Kedu, dị iche na ndị a, n'ihi na:
"nnọkọ bụ ihe na-emeghe, ngwa izipu ozi ọha na eze na-eji usoro nke ihe nkesa nchekwa na usoro usoro yabasị iji zipu ozi ezoro ezo site na njedebe na njedebe metadata onye ọrụ. Ọ na-eme ya mgbe ị na-enye atụmatụ ndị a na-ahụkarị nke ngwa ngwa izipu ozi".
Delta Nkata, nwekwara àgwà ndị na-adịghị mma, ebe ọ nwere a centralized akaraN'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-eji usoro nkwukọrịta kachasị ukwuu, nke kachasị iche na nke enweghị usoro emebere: netwọkụ email dị adị.
1 Delta Nkata
1.1 Isi atụmatụ
1.2 Ntinye na GNU / Linux
Ọ bụ mmepe nke Free Software na Open Source.
Delta Chat na-enye nkata ozugbo na mmekọrịta dị n'etiti ngwaọrụ.
Ọ bụ a multiplatform ngwa (Windows, MacOS, Linux, A gam akporo na iOS).
Nyochawa ya, ọ bụ ngwa email mana yana mkparịta ụka nkata ọgbara ọhụrụ.
Eziga ozi (email) site na iji akaụntụ email onye ọrụ na onye na-eweta ya.
Setịpụrụ izo ya ezo si na-njedebe na-akpaghị aka mgbe ndị ọrụ malitere ịgwa ibe ha okwu.
Ọ na-enye nnwale nnwale nnwale nke otu na-ekwenye na izo ya ezo na njedebe ga-adị mma megide ndị na-eweta ọrụ ma ọ bụ ọgụ mwakpo
Cheta na: Banyere izo ya ezo, ọ ga-ahụ kwuru na Izuzo na njedebe ọ bụghị naanị na-arụ ọrụ n'etiti ngwa Delta Nkata, kamakwa ngwa email ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha dakọtara na Autocrypt Ọkwa 1 izo ya ezo ọkọlọtọ.
Banyere anyị GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ, Delta Nkata na-enye echichi faịlụ na usoro .deb y AppImage, ihe dị ka 70 MB y 107 MB n'otu n'otu, nke nwere ugbu a nkwụsi ike mbipute 1.0.0, na nso nso a wepụtara na December gara aga. Ọzọkwa, ọ dị na Flatpak na ebe nchekwa AUR na Arch Linux. Gịnị na-eme ka nrụnye ya dị mfe ma dakọtara na ọtụtụ nkesa anyị ugbu a.
para android, Delta Nkata, dị na ụdị dị iche iche na nha, dịka ụdị ngwaọrụ na ụdị sistemụ arụmọrụ eji.
N'ikpeazụ, o nwere ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị zuru oke, dị mfe, na Spanish. O nwere otutu ozi bara uru na nke zuru ezu, kesara na ngalaba, dika: Budata, Blog, Nkwado, Ajụjụ na Nzukọ. Karịsịa, ya FAQ ngalaba O nwere otutu ozi di nkpa na emelitere banyere ngwa a, nke gha enyere aka ighota ihe omimi ya, oru ya na ebumnuche ya.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Delta Chat», ihe na-adọrọ mmasị, ngwa izipu ozi n'efu na nke na-emeghe, nke nwere atụmatụ bara uru ịtụle iji bụrụ onye ọzọ na ndị ọzọ ewu ewu Telegram ma ọ bụ WhatsApp, ekele maka eziokwu ahụ bụ na ọ na-ezere nsuso na enweghị njikwa etiti, ọ bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Delta Chat: Ngwa izipu ozi email nwere onwe na oghe
RLBox, teknụzụ nkewapụrụ ọhụụ ọhụụ nke Mozilla ji